Ganateewwan DataPilot Gareessuu
Gabateen DataPilot argamu galfatoota garagaraa baay'ee qabachuu danda'a. Galfatoota gareessuudhaan, bu'aa mul'atu fooyyessuu dandeessa.
Maadhee ykn hammangaa maadheelee gabatee DataPilot keessaa filadhu.
Deetaa - Garee fi Toorii - Gareessi filadhu.
Dhangii maadheelee filatamanii irratti hundaa'uudhaan, dirreen garee haaraa gara gabatee DataPilot dabalama, ykn qaaqota Gareessuu keessaa tokko, gatiiwwan lakkoofsaaf, ykn gatiiwwan guyyaatiif argita.
Gabateen DataPilot akkaataa gareessuun raawwatuun qindaa'uu qaba.
Gareessuu haquuf, garee keessa cuqaasi, achiin Deetaa - Garee fi Toorii - Gareerraa baasi filadhu.
Title is: Ganateewwan DataPilot Gareessuu